ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦးသည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှ၊ ပစိဖိတ်နှင့် ဓနသဟာယရေးရာဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Seyed Abbas Aragchi ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
(က)-ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် စံချိန်စံညွှန်း ပြည့်မီ အချိန်မီပြီးစီးအသုံးပြုနိုင်ရန် မည်သို့ စီမံဆောင်ရွက်သွားမည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(ခ)-ပြည်နယ်၊ ပြည်မပညာရေးကွာဟမှုနည်းပါးစေရန် ဝေးလံခေါင်သီဒေသများမှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်‌ရာခိုင်နှုန်းအား တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ /မရှိနှင့်‌ စပ်လျဉ်းသည့်‌မေးခွန်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦးသည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှ၊ ပစိဖိတ်နှင့် ဓနသဟာယရေးရာဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Seyed Abbas Aragchi ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
5 July 2013 - 0
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် လ ၄ ရက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦးသည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ အာရှ။ ပစိဖိတ်နှင့် ဓနသဟာယရေးရာဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Seyed Abbas Aragchi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဇူလိုင် လ ၄ ရက်နေ့ (၁၀:၃၀) နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အဦ၊ အဆောင်အမှတ်(၁) ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံလွှတ်တော်များအချင်းချင်း အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်တိုး၊ လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာစိုးရင်း၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကိုထွန်းနှင့် လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစံရွှေဝင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲပညာရှင်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံသ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာေ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာန(၂၉) ဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး(၁၂)ခုတို့မှ ရုံးအဖွဲ့မှူးများနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ စံရွှေဝင်း Access to Health Fund Manager of United Nations Office for Project Services (UNOPS) အဖွဲ့မှ Fund Director Mr.Oren Ginzburg ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်အောင် ဂျပန်နိုင်ငံ Toyo Eiwa Women’s College (TEWC) မှ Professor Takizawa Saburo ဦးဆောင်သည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ